Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » Ukudubula ngendlela eyoyikekayo eTanzania: Kusweleke uGunman
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • ulwaphulo-mthetho • iindaba • Safety • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Amapolisa aseTanzania adubule abulala indoda eyayiphethe umpu ekukholelwa ukuba yeyomntu waseSomalia ebalisa ngokudubula kunye namapolisa aseDar es Salaam emva kokuba le ndoda idubule yabulala amapolisa amabini kwisehlo esothusayo namhlanje.
Umzi wommeli welizwe laseMelika eTanzania ukhuphe isilumkiso kubemi baseMelika kweli lizwe ngenxa yokudutyulwa eDar es Salaam.
Ukudubula kwenzeka kufutshane neNdlu yoZakuzo yaseFrance ekwalikhaya kumaJapan, eKenya, nakwindlu yozakuzo yaseRussia kunye namaziko emali.
Isizathu somhlaseli sokuhlaselwa asaziwa ngeli xesha.
Umzi wozakuzo waseMelika eTanzania ukhuphe isilumkiso kubemi baseMelika ukuba bahlale bethe qwa xa beqhuba kwiindawo ezahlukeneyo zorhwebo lwaseTanzania. Umzi wommeli-lizwe wase-US ubongoze abemi bawo ukuba "bayiphephe le ndawo kwaye babeke iliso kumajelo asekuhlaleni ukuze bafumane ulwazi."
Umhlaseli ongaziwayo owayekwihlokondiba laseTanzania eDar es Salaam, wadubula wabulala amapolisa amabini kwisitalato esixakekileyo kufutshane neNdlu yoZakuzo yaseMelika eTanzania.
Ukudubula kwenzeke e-Ali Hassan Mwinyi Road kufutshane ne-Selander Bridge ngenjikalanga, ngexesha leMpuma Afrika.
Abaqhubi beemoto aboyikayo nabakhweli bazishiyile iimoto zabo babaleka besindisa ubomi babo, zatsho iintatheli kwindawo leyo.
Amapolisa ayirhangqa le ndoda aza amdubula ngemipu kufuphi neNdlu yoZakuzo yaseFrance ekule ndawo.
Le ndawo ikwalikhaya kubahlali nakwiiofisi zemishini yamanye amazwe kubandakanya oonozakuzaku baseJapan, baseKenya nabaseRussia, kwaye ikufutshane namaziko emali kubandakanya neKCB Bank yaseKenya kunye neStanbic Bank yaseMzantsi Afrika.
Amapolisa namagosa okhuseleko eTanzania okwangoku asizukuchaza esona sizathu sokuhlaselwa phakathi kwemini.
Abasebenzisi bendlela kwindawo yaseOysterbay naseUpanga edla ngokuzola kunyanzeleke ukuba bazishiye iimoto zabo xa bebalekela ubomi babo.
Iividiyo ezithunyelwe kumajelo asekuhlaleni zibonise ukuba amapolisa adityanisiwe ejikeleza umhlaseli ngaphambi kokuba adutyulwe embindini wendlela ngaphandle kwesango loZakuzo laseFrance.
Amangqina okuzibonela awayekuloo ndawo athi umntu ohlaseleyo wayenokubabulala abanye abantu ngexesha lokudubula.
Isilumkiso sezokhuseleko esisuka kwindlu yozakuzo yase-US sifundeka ngolu hlobo:
Isilumkiso soKhuseleko -Indlu yoZakuzo yase-US eDar es Salaam, Agasti 25, 2021
Indawo: Indawo ekufuphi neNdlu yoZakuzo yaseFrance kwindlela u-Ali Hassan Mwinyi, eDar es Salaam, eTanzania
Indawo: Ukuhlangana okuxhobileyo kufutshane neNdlu yoZakuzo yaseFrance.
Kukho iingxelo zokuqubisana ngezixhobo okuqhubekayo kufutshane neNdlu yoZakuzo yaseFrance kwindlela u-Ali Hassan Mwinyi.
Amanyathelo oza kuwathatha:
Abemi base-US kunye nabasebenzi bakarhulumente base-US bayacetyiswa ukuba bayiphephe le ndawo.